ပုံစံတင်ပို့ရန်ကက်ဘိနက်ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံ fireproof အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Professional က Customize
နေအိမ် > ဖြစ်ရပ်များ
Benin Client အတွက်စိတ်ကြိုက်မီးသတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသေတ္တာ
ဇိမ်ခံနာရီ Windder သည်မလေးရှား0န်ဆောင်မှုခံယူသူအတွက်နာရီ 20 နှင့်လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲ4လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲပါ0င်သည်
အရည်အသွေးမြင့် Watch Winder Safe Box 120 Min Fire Rating-Foshan Whansierxin Safe Safe
စိတ်ကြိုက်မီးသတ်ဆေးသုတ်ခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတပ်ဆင်ထားသည် weierxin ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
Weierxin ကို Safe အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Professional က Customize ကက်ဘိနက်ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံဖြည့်စွက် fireproof, ကျနော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးများအတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာနှငျ့သငျမှအများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ဆောင်ခဲ့တစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအစဉ်အမြဲနောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ။
တစ်ဦးက: 1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကျိုးရှိစေရန်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းစောင့်ရှောက်လော့။ 2. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်တိုင်းဖောက်သည်ဆက်ဆံပါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့, သူတို့နှင့်အတူသူတို့ထံမှလာဘယ်မှာနေပါစေစီးပွားရေးနှင့်လုပ်မိတ်ဆွေများကိုလုပ်ပါ။
2.Q. ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာငါတို့လိုဂို print ထုတ်နိုင်ပါသလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်သင်၏လိုဂို print ထုတ်မရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖြေကျနော်တို့ Safe တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
2.We အီး, ROSH, FCC သည်လွန်ပြီ။
3.We ထောက်ခံမှု OEM& လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု။
4.Our စက်ရုံအဲဒီ ISO 9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လွန်ပြီ။
Weierxin ကို Safe အကြောင်း
2004 ကတည်းက Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်, အတွင်းတည်ရှိပြီး Foshan Weierxin ကို Safe Co. , Ltd မှထက်ပို 23000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း 100 ကျော်န်ထမ်းရှိပါတယ်, 10 နှစ်ကျော် Safe ထုတ်လုပ်အတွေ့အကြုံကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းပါပဲ။ Weierxin ကို Safe Safe အိမ် Safe, ရုံး Safe, ဟိုတယ် Safe, winder Safe watch, သံမဏိကက်ဘိနက်, သေနတ် Safe, ဖိုင်များ Safe, ငွေသား box ကို Vault တံခါးကိုနှင့်အခြားမြင့်မားတဲ့ဖန်လုံခြုံရေးထုတ်ကုန် fireproof ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး။ ကျနော်တို့အီး, ROHS, FCC နှင့် fireproof လက်မှတ်လွန်ပါတယ်။ ထက်ပိုမို 500,000 ယူနစ်များ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစကေးနှင့်အတူ, ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အိမ်, ရုံး, ကျောင်း, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်စသည်တို့အဖြစ်အများအပြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုကြသည် Weierxin ကို Safe လူတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ဘယ်မှာစိတ်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ငြိမ်းချမ်းရေး, အလုပ်နှင့်ကစားပေးသည်။ ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချ, အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုပြီ အကောင်းဆုံး-In-class ကိုတန်ဖိုးအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရ, အရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကတိပေးသောငါတို့စျေးကွက်၌တည်၏။ Weierxin ကို Safe ပြည်တွင်းစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုထက် 1000 ကုန်သည်တွေရှိပါတယ်, ကျော်5သန်းသစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်လည်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တင်ပို့နေကြသည်။ ကျနော်တို့အများကြီးပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ OEM ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။ 2004 ကတည်းကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများစဉ်ဆက်မပြတ် optimized နှင့်တိုးတက်နှင့်နောက်လိုက်ဖို့သစ္စာစောင့်သိသည်အသုံးပြုသူများနေဆဲရှိပါတယ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကောင်းသော OEM နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသင်းကိုတက် builted ပါပြီ& OMD experience.OEM / လိမ္မော်ရောင်အမိန့်ကြိုဆိုနေကြသည်။ ကျနော်တို့ R ကို၌ကြီးသောအားသာချက်ရှိ&: D, အထူးသဖြင့် fireproof Safe အပေါ်ဖောက်သည် Safe ၏စည်းဝေးပွဲကို။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အလုပ်လုပ်အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူကျနော်တို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထောက်ခံမှုအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် viewd နေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်ကင်းသောဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုအသုံးချပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးစိတ်ကြိုက်0န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ဤအစည်းအဝေးတွင်သင်၏အကြံဥာဏ်များကို ဆက်သွယ်. မေးခွန်းများစွာမေးရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ယခုအခါသူတို့သည်နိုင်ငံပေါင်း 500 သို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တင်ပို့နေကြသည်။
ဒီ client ကကျွန်တော်တို့ကို Alibaba ကနေတွေ့ပြီ။ သူမသည်အစိုးရအတွက်မီးခံလုံခြုံမှုသေတ္တာကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။သူမသည် FireProof ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေတ္တာ၏အမေရိကန်ဓာတ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုပို့ခဲ့သည်။ သူတို့က 10PCs အကြီးစားဘေးဒဏ်ခံနိုင်သည့်သေတ္တာကြီးများကို Rotary platform နှင့် 25pc အရွယ်အစားမီးသက်ဆိုင်အန္တရာယ်ရှိသေတ္တာများဖြင့်ကြီးမားသောမီးသတ်ဆေးသေတ္တာများဖြင့်လိုချင်သည်။ဆက်သွယ်ရေးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အညီရေးဆွဲခြင်းကို ဦး စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးသိုက်လက်ခံရရှိပြီးနောက်အတည်ပြုချက်များအတွက်နမူနာတစ်ခုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နမူနာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။သူတို့လုံခြုံမှုသေတ္တာကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ client ကိုကျေနပ်သည်။ သူတို့နောက်စီမံကိန်းအတွက်သူတို့ကအသစ်သောအမိန့်အသစ်ကိုချထားပါလိမ့်မယ်။Foshan Weierxin သည် ပိုမို. ဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်လုံခြုံရေးအကွက်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။
မလေးရှား0န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဇိမ်ခံနာရီ Winder Safe Safe Safe ကိုလိုချင်သည်။ ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးပြီးနောက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုအတည်ပြုပြီးသည် - 20 နာရီ, အံဆွဲ (4 အံဆွဲ,သူ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။Foshan Weierxin သည် ပိုမို. ဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်လုံခြုံရေးအကွက်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။
ဤသည်စိတ်ကြိုက်နာရီ Winder Safe Box ကိုဖြစ်ပါတယ်။Water Safe Safe Watch Watch Twof Watch Watch Watch Watch Watch ဖြစ်သည်။၎င်းတွင်ရော့ခ် 12 ခုရှိသည်။ ရဟတ်6လှည့်သည်တစ်ဖက်တွင်ရှိပြီး Rerowors6ရဟတ်6သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသည်။ဒီမှာ2လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲရှိတယ်။သင်သည်သင်၏အဖိုးတန်လက်ဝတ်ရတနာကိုထားနိုင်ပါတယ်
Foshan Weierxin Safe Safe သည် Safe Safe Box ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
Consolidation Shiption-The FireProof ဖိုင်ရေးအဖွဲ့
Consolidation Shipment-FireProof ဖိုင်ရေးအဖွဲ့အစိုးရ။
လက်ကားအမေဇုံကို eBay ကောင်းသောအဘိုးနှင့် LCD ကိုအတူဟော့ရောင်းအား Mini ကိုကို Safe Box ကိုစိတ်ကြိုက် - Weierxin ကို Safe
Size: H200 * W310 * D200mmသော့ခတ်: LCD ကိုအတူအီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်N.W .: 5.5KGG.W .: 6.0KG
High Quality Fireproof ကို Safe Box ကို OEM လက်ကား - Foshan Weierxin ကို Safe Co. , Ltd မှ
Size: စိတ်တိုင်းကျမီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်:2နာရီသော့ခတ်: အီလက်ထရောနစ်သော့ခတ် / Manul Lock ကို
နယူး Lock ကို 1 နာရီမီးသတ်ခဲ့သည် Rating ပေးသွင်းမှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံး Fireproof ကို Safe Box ကို QG-60
နယူး Lock ကို 1 နာရီမီးသတ်ခဲ့သည် Rating နှင့်အတူအကောင်းဆုံး Fireproof ကို Safe Box ကို QG-60 ။